Magacyada 5 wasiir oo dowlada Soomaaliya u saartay baaritaanka geeridii Taliyaha Booliska – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magacyada 5 wasiir oo dowlada Soomaaliya u saartay baaritaanka geeridii Taliyaha Booliska
A warsame 31 October 2014
Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay guddi wasiirro ah oo ka kooban 5 xubnood oo baaritaan ku sameeya geerida kadiska ah ee ku timid taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed, Jen. Maxamed Xasan Ismaciil, kaasoo isagoo ku sugan baar ku yaalla Xeebta Liido uu xanuun kusoo booday, waxyar kadibna ku geeriyooday Isbitaalka ku yaalla degmada C/caziiz.
Xubnaha R/wasaare Cabdiweli Sheekh u magacaabay barista geerida degdega ah eek u timid Jen. Maxamed Xasan Ismaciil ayaa kala ah:
1- Ra’iisul Wasaare ku-xigeen ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta, Ridwaan Xirsi Maxamed (Guddoomiye)
2- Wasiirka Caafimaadka, Cali Maxamed Maxamuud (Xubin)
3- Wasiirka Warfaafinta, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow (Xubin)
4- Wasiirka Beeraha, Axmed Cabdi Baafo (Xubin)
5- Wasiirka Amniga Qaranka, Khaliif Axmed Ereg (Xubin)
Geerida taliyaha oo kedis aheyd ayaa shaki ku abuurtay Laamaha sirdoonka Soomaaliya, waxaana arrinta loo qabtay dhowr qof oo ay ka mid yihiin dhaqaatiir iyo milkiilayaal maqaayadeed.
Muqdisho: Gaari ku qarxay xaafada Tarabuunka oo dilay labo ruux